Shaqaale samafal oo la afduubtay oo la ogaaday halka ay ku sugan yihiin Shaaficiyah.com � Arts-Osmanart
Shaqaale samafal oo la afduubtay oo la ogaaday halka ay ku sugan yihiin Hayadda ay ka tirsan yihiin shaqale samafal oo dhawaan laga qafaashay deegaanka Bacaad weyn ee gobolka Mudug oo la yiraahdo IAS ayaa sheegtay inay xog ku heshay in shaqalahaasi ay hadda gacan ku hayaan koox burcad badeed Soomaali ah oo ay lacago madax furasho ah ka rabaan.
War saxaafadeed ka soo baxay hayadda International Aid Services ayaa waxay ku sheegeen in Sadex ruux ee ajanabiga ah hadda lagu hayo deegaan ay si weuyn u maamuulaan burcad badeeda Soomaalida oo ka tirsan deegaanada uu ka jiro m/mulka Puntland waxaana warka lagu sheegay in kooxda wax afduubataybaay ka tirsan yihiin burcad badeeda Soomaalida.
Warkaan ka soo baxay hayadda IAS waxaa xusay in inkastoo aysan koooxda haysata si cad ugu dhawaaqin inta ay leeg tahay madax furashad ay u baahan yihiin haddana ay u baahan yihiin in laga siiyo lacago madax furasho ah.
IAS waxay tilmaantay inay hadda jiraan wada hadalo ladoonayo in shaqalaahaasi lagu sii daayo haddana waxay dalbatay in si deg deg ah oo shuruud laaan ah ay kusii daayaankoocda haysata.
Hayadda ay ka tirsan yihiin shaqaalaha lagu haysto deegaanada Puntland ee IAS oo sanadkii 1989lagu aas aasay wadanka Sweden waxay si gaar ah hawlo ay ka mid yihiin taageerida waxbarashada, biyaha, adeegyada caafimaadka iyo raashinka gar gaarka ay muddo ka waday wadamo ku yaala geeska Africa gaar ahaan Soomaaliya.
Soomaaliya tan iyo markii ay dhacday dawladii dhexe waxaa aad ugu badnaa afduubida shaqaalaha u shaqeeya hayadaha gar gaarka.